Tag: Security Data | Martech Zone
Tag: Security Data
Ny fahafahana mitahiry rakitra sarobidy toy ny sary, horonan-tsary ary mozika amin'ny fomba milamina ao anaty rahona dia fahatsinjovana manintona, indrindra amin'ny fitadidiana (fomba) kely amin'ny fitaovana finday sy ny vidin'ny fitadidiana fanampiny. Fa inona no tokony hotadiavinao rehefa misafidy fitahirizana rahona sy vahaolana fifampizaràna rakitra? Eto, vakiantsika ireo zavatra dimy tokony hodinihin'ny tsirairay alohan'ny hanapahana hevitra hoe aiza no hametrahana ny angonany. Fanaraha-maso - Mifehy ve aho? Iray amin'ny
Alarobia, Novambra 7, 2018 Ankit Patel
Tahaka ny nahatonga ny revolisiona e-varotra teo amin'ny moron'ny fiantsenana, miomàna amin'ny fanovana hafa amin'ny endrika teknolojia blockchain. Na inona na inona fanamby eo amin'ny sehatry ny e-varotra, mampanantena ny blockchain fa hiatrika betsaka amin'izy ireo ary hanamora ny asa ataon'ny mpivarotra sy ny mpividy. Raha te hahalala ny fomba hahitan'ny blockchain tombony tsara ny indostrian'ny e-varotra, voalohany, tokony ho fantatrao ny tombony azo avy amin'ny teknolojia blockchain sy ny
Inona ny Big Data? Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny angona lehibe?
Alarobia, Martsa 8, 2017 Zoma, Desambra 1, 2017 Douglas Karr
Ny fampanantenan'ny angon-drakitra lehibe dia ny fananan'ny orinasa faharanitan-tsaina betsaka kokoa eo am-pelatanan'izy ireo handray fanapahan-kevitra sy faminaniana marina momba ny fomba fiasan'ny orinasany. Andao hizaha hevitra momba ny Big Data, inona izany, ary ny antony tokony hampiasantsika azy. Big Data dia Tarika Lehibe Tsy izany no resahintsika eto, fa mety mihaino hira mahafinaritra ianao eo am-pamakiana momba ny Big Data. Tsy izaho
Ny personalization dia ny fahatezerana rehetra ankehitriny fa paikady mety hanaratsy be raha tsy mety ny nanaovana azy. Andao horaisina ny ohatra mahazatra indrindra - ahoana ny fahatsapanao rehefa mahazo mailaka ianao amin'izay hisokafany, Ry malala %% anarana voalohany %%… tsy izany ve no ratsy indrindra? Na dia ohatra miharihary aza izany, ny tsy dia miharihary dia ny fandefasana tolotra sy atiny tsy misy dikany amin'ny fiarahamoninao. Izany dia mitaky fototra efa napetraka. Tanjona manan-karena, mavitrika ary voafaritra tsara
Tuesday, December 13, 2016 Thursday, December 15, 2016